Kuteerera: Mubairo-Unotungamirwa Mhinduro Platform | Martech Zone
Svondo, Kukadzi 10, 2019 Muvhuro, Kukadzi 11, 2019 Douglas Karr
Iko hakuna zuva rinopfuura iro ini ndisiri kuunzwa nepoll, kuongorora, kana kubvunzwa mhinduro. Kunze kwekunge ndanyatsogutsikana kana kutsamwiswa nechiratidzo, ini ndinowanzo bvisa chikumbiro ndoenderera kumberi. Ehezve, nguva dzese, mukati mechinguva, ndinobvunzwa mhinduro uye ndichiudzwa kuti zvaizokosheswa zvekuti ndinowana mubairo.
Feeder ipuratifomu yemhinduro iyo inokutendera iwe kutora mhinduro nekupa mubayiro vatengi vako. Ivo vanowana yakasarudzika gasified chiitiko uye iwe unowana yakakosha mhinduro iwe yauri kutsvaga. Ipuratifomu yave ichizivikanwa seimwe yeanyore kushandisa!
Feedier chimiro chakazara chikuva, uye inosanganisira:
Template & Bot Kugadzira - Shandisa pre-yakatsanangurwa matemplate kana yedu yekugadzira bot kuti tigadzirire mukati memaminetsi mashoma, hapana kunetsekana. Gadzirisa logo, hukuru ruvara, chifukidzo chemufananidzo kuti uwane mutambo wakaringana wesangano rako. Ita yako ive yako nekuwedzera yakasarudzika duraini, zvinyowani zvemukati, tsoka yetsoka uye kunyange shandura mutauro. Iwe unogona kunyange kuitisa yako mutakuri kune yakatarwa date renji.
Shingairira nevatengi vako - Tumira maemail akasarudzika kune ako mazita, tumira mameseji akagadziridzwa kunhamba dzenhare, isa widget yakanaka pane yako saiti kana webhu webhu, kana kugadzira PDF inodhindwa iwe yaunogona kutumira pamwe nezvako zvigadzirwa kuti utore mhinduro.
Gadzira mhando shanu dzemibvunzo ine musoro - Feedier inotsigira ipfupi zvinyorwa, NPS mamaki®, inotsvedza, sarudza uye yakareba mavara mavara mhando mibvunzo. Unogona kuratidza mibvunzo inoenderana nevashandisi chaivo zvichienderana nekugutsikana kwavo, kana kugadzira yakadzika mibvunzo kutenderera kunoenderana nemhinduro dzakapfuura dzemushandisi uye seti yemamiriro awatsanangura. Akanaka mafi dhizaini anowanikwa ekugadzira akanakisa, akasimudzwa zviitiko.
Ipa mubayiro vashandisi vako - Ipa macouponi uye mavhoti ekukurudzira kutenga mune ramangwana uchidzora mukana unowanikwa. Tumira mafaira akajairwa senge zvemukati zvevashandisi vako pamwe neyemubairo email yavanogashira. Kunyangwe iri kiyi rezinesi, yakakoka chaiyo kana chero mhando meseji yetsika meseji, Feedier anozvitumira iwe. Iwe unogona zvakare kupa mari chaiyo kuburikidza nePaypal neFeedier ine muganho wekugovera uye unotsanangurwa mukana.
Tora uye unganidza wongororo yemushandisi uye maemail - Ratidza bhatani re5-nyeredzi bhatani chete kune vanogutsikana uye vanoita vashandisi kune chero chikuva senge Amazon. Ratidza mabhatani ekuteedzera pane ako aunofarira masocial network pakupera kwechiitiko chekupindura. Tora zvipupuriro zvitsva nekutsvaga vashandisi vanofara uye nekuvakumbira kuti vakusiire humbowo hwakakwana pamwe neemail yavo. Simbisa runyorwa rwako rwekunyorera sezvo maemail anodikanwa kuti uwane mubairo.
Tora mhinduro zvakasiyana - Feedier inoita kuti iwe ubate nevatengi vako zvakananga kuburikidza neemail yavo uye neyako CRM. Chirevo chakazara chakavakirwa chero mhinduro kuitira kuti unzwisise chero mutengi mune kamwe chete. Peji remubairo rinokutendera iwe kuti uwane iyo rondedzero yemubairo wakapihwa kuitira kuti iwe ugone kupinda mukubata zvakananga.
Yakasimba analytics - inosanganisira chishandiso chakashandiswa, bhurawuza, nguva girafu, mhinduro, kugutsikana, huwandu hwekupinda mhinduro, kushanya, nyika dzakanakisa, avhareji yenguva, uye NPS. Izwi rinotsvaga rinokubatsira kutsvaga mhinduro dzako dzese nekutarisa akakosha mazwi.
Zvekushandisa Zvishandiso - Tumira zvinyorwa zvemhinduro zvinoenderana nemafirita ako akasimba ku .CSV kana .JSON mukubaya kumwe chete. Chengetedza timu yako kuburikidza nemabasa akasiyana kuti uwane vakawanda vanobatsirana sezviri kudikanwa kushanda pamwe chete. Gamuchira zviziviso nezve izvo zviri kuitika pane yako Feedier account pamwe neakajeka masvondo mashumo.
Sangana Anotya - Feedier ane yakanyorwa JSON REST API kurega mushambadzi wako asanganise nemapuratifomu ako uye maturusi. Gadzira Zapier ZAPs pamwe neFeedier zvinokonzeresa kuti uite zviito zvako pese paunogamuchira mhinduro. Gamuchira mubhadharo weJSON kune yako yega webhook URL chero nguva mhinduro painogamuchirwa nezvose zvayo.
Uye, ye Martech Zone vaverengi, heino a 20% coupon coupon paunonyorera nekodhi promo WELCOMEFEEDIER2018.
Saina Kuti Unyore
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yedu yakabatana chinongedzo cheKuteerera mune ino chinyorwa.